Savorovoro tany Toamasina Tsy nahitana porofo ilay resaka karandoha
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny mpitandro filaminana nisahana ny fanadihadiana miady amin’ny heloka bevava ao Toamasina omaly.
«Hatreto aloha dia tsy nahitana porofo velively mahakasika ilay fahitana karandohan’olona teto Toamasina.» Io no vaovao ofisialy nampitain’ny zandary nandritra ny tafa manokana tamin’ny mpanao gazetinay omaly atoandro. Izay ihany aloha no vaovao azo ampitaina fa ho hita eo ny fivoaran’ny toe-draharaha sy ny famotorana, hoy hatrany ny loharanom-baovao izay nanankinan’ny mpitandro filaminana rehetra any an-toerana ny fikarohana ny marina mahakasika ity raharaha ity.
Midika izao fa miendrika fitondrana filaminan-tsaina sy fitoniana ho an’ny mponina ao amin’ny renivohitry ny Faritra Atsinanana. Mbola tsy nanome fanampim-baovao kosa ny mpitandro filaminana mahakasika ny tohin’ny fepetra raisina mahakasika ireo tompon-trano izay navotana noho ny firohotan’ny vahoaka manoloana ny heverina fa tsaho ka saika namparomotra ireo mponina. Andrasana ihany koa ny tohin’ny fandraisana andraikitr’ireo manampahefana mahakasika ilay tovovavy 21 taona izay namoaka izao vaovao izao. Noho ny fikatsahana ny tombontsoan’ny besinimaro sy isorohana ny korontana hatrany, mbola samy tsy nisy naharenesam-peo ny mpitandro filaminana mahakasika ireo sokajin’olona ireo.